UVukayibambe ukhuza umkhuba phakathi ku-ANC | IOL Isolezwe
UVukayibambe ukhuza umkhuba phakathi ku-ANC
Isolezwe / 26 July 2012, 10:56am / CELANI SIKHAKHANE
UMNUZ Vukani Ndlovu weAncyl Isithombe:GUGU MQADI
I-ANCYL KwaZulu-Natal ikhathazekile ngamalungu kaKhongolose esifundazweni ngokuthi asephendula imibuthano yeqembu imikhankaso yezikhundla zobuholi ebheke eMangaung ekubeni ilungelo lokudingida izikhundla lizovulwa ngo-Okthoba.
Umgqugquzeli wesigungu sesikhashana se-ANCYL esifundazweni uMnuz Vukani Ndlovu (osesithombeni), uthe okubakhathazayo ukuthi lolu daba lubukeka lwenzelela ngoba kukhona ukuthi uma bekhuluma ngabaholi basatshiswe ngokuxoshwa eqenjini.
“Okusikhathazayo ukuthi lo mkhuba uyaqhubeka njengoba sekunemibuthano ye-ANC okuthi uma ikhona kuculwe izingoma ezigqugquzela ukuthi kukhethwe abaholi abathile okuyinto esiyibona izodala uqhekeko olukhulu enhlanganweni ngoba kuyaziwa ukuthi u-Okthoba awukafiki,” kusho uNdlovu.
Uthe kunomhlangano abebenawo obuhanjelwe uNobhala we-ANC esifundazweni uMnuz Sihle Zikalala abambikele kuwo lolu daba .
Lolu phiko esifundazweni luthi okwenziwa amalungu e-ANC KwaZulu-Natal kwenza kube sengathi kukhona izifundazwe ezinelungelo lokuqhakambisa abaholi ezibafunayo eMangaung.
UNdlovu uke wakhala nangokwenzeke emngcwabeni kaMnuz Wandile Mkhize owayenguSotswebhu we-ANC kumasipala wase-Hibiscus nalapho inkonzo yomngcwabo yaphendulwa umkhankaso wokubuyisela uMengameli Jacob Zuma esikhundleni.
Okukhalisa i-ANCYL ukuthi kule mibuthano sekunamaculo akhona aseka abaholi abathile ukuthi kumele kube yibo abakhethwayo eMangaung.
Phakathi kwezingoma esezishisa izikhotha kulezi zinsuku ezihambisana nemikhankaso yaseMangaung kukhona ethi “uZuma wethu sizonyuka naye simubambe ngesandla siyongena naye ekhaya eMangaung,” kanti isuselwa eculweni lamakholwa elithi “Ukholo lwami ngonyuka nalo ngilubambe ngesandla.’’
Enye ingoma edla ubhedu ithi “sekuyozwakala eMangaung” kanti igqame ngesikhathi bekunengqungquthela yezinsuku ezintathu yamadlelandawonye aholwa i-ANC eHoward College ngempelasonto.
Ngaphandle kwalokho amalungu e-ANC esifundazweni awasakufihli ukuthi afuna uZuma athathe ihlandla lesibili njengoba esesebenzisa ngisho uphawu lwe-Kaizer Chiefs lokuphakamisa iminwe emibili .
Lolu phawu luphinde lwabonakala nangesikhathi kuqhubeka ingqungquthela ye-SACP ebisoNgoye .
UNobhala we-ANC KwaZulu-Natal, uthe uma i-ANCYL kukhona ekhala ngakho kumele iqonde kuKhongolose ngoba bona abaxhumani namalungu abo kwabezindaba.